Portiogaly: Fiombonana ho fanomezam-boninahitra an’i Jose Saramago, mpandresy tamin’ny loka Nobel · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Mey 2018 5:09 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, 简体中文, 繁體中文, English, Nederlands, عربي, Español, Português
(Marihina fa tamin'ny 18 Jona 2010 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Fundação Jose Saramago; sary tao amin'ny Flickr, nampiasana lisansa CC
Maty teo amin'ny faha-87 taonany ny 18 Jona 2010 ilay mpanoratra Portiogey sady hany mpandresy tamin'ny loka Nobel amn'ny teny Portiogey ho an'ny Literatiora José Saramago tao amin'ny toeram-ponenany tao Lanzarote noho ny fahanterana sy ny aretina naharitra nahazo azy Namela ho antsika karazana tantara noforonina maro feno fomba fisainana filôzôfika izay namoronany ny toe-javatra tsy azo eritreretina sy tsy ho tanteraka izy satria nahazo fanakianana izy ireny anisan'izany ny boky nahalafosana betsaka indrindra Blindness mitantara ny firenena iray izay jamba avokoa ny vahoaka ao aminy sy ny Death with Interruptions izay mitrandraka ny fifandirana ara-tsosialy ao amin'ny firenena iray tsy ahitana olona maty intsony.
Fanamarihana avy amin'ny mpanoratra: niniana natao ny tsy fisian'ny mari-piatoana ato anatin'ity lahatsoratra ity.
@LuisMonteiro, nanaitra ahy i José Saramago tamin'ny maha olona azo itokisana azy, ny tsy firaiketam-pony tamin'ny laza, ny fihetsiny mendrika tamin'ny fifandraisany amin'ny idealiny, indrindra moa fa tsy mizara azy ireo indraindray isika. Lehilahy.
Nametraka ny fanahy revolisionera izay tsy voatery ho ekena na takatry ny saina hatrany ny tsy finoany an'Andriamanitra sy ny fikatrohana ara-politika komonista ao aminy: nifindra tany Espaina izy tamin'ny taompolo 1990 taorian'ny nandrarana azy tsy handray anjara tamin'ny fifaninanana ara-literatiora tamin'ny sanganasany niteraka adihevitra “Ny Filazantsara (Vaovao Mahafaly) araka an'i Jesoa Kristy.”
@tuliovianna Raha misy ny helo Kristiana, nomen'ny fanjakana mari-pankasitrahana i Saramago amin'izao fotoana izao; manolotra ny kabarim-piarahabana i Darwin
Minitra vitsy taorian'ilay fanambaràna ny fahafatesan'i Saramago, nanomboka nanome voninahitra an'i Saramago ireo mpisera manerana izao tontolo izao ary lasa iray tamin'ireo lohahevitra nahazo fanehoan-kevitra betsaka indrindra tao amin'ny Twitter izany na dia malaza aza ny fanoherany ity fitaovam-pifandraisana ity.
@marionel, tsy tia Twitter i Saramago sady tsy nino loatra ny Aterineto izy, na dia nahazo fanomezam-boninahitra ho Lohahevitra Laharana 5 voalohany aza izany
Saramago tao amin'ny Twitter:”Ireo tarehin-tsoratra miisa 140 ireo dia mampiseho zavatra efa fantatsika: ny fironana mankany amin'ny tarehin-tsoratra tokana ho toy ny endriky ny fifandraisana. Midina tsikelikely mankany amin'ny trerona isika.” Sary avy amin'i Liquidslave tao amin'ny Flickr, nomena lisansa CC
Sarotra tamin'ny fandikan-teny ny fomba fanoratan'i Saramago ary indrindra fa ilay amin'ny teny Portiogey araka ny nomarihan'ny olona sasany
@chonnye, nodimandry i Jose Saramago ilay mpanoratra tantara tiako indrindra. Manana feony ny bokiny izay tsy hain'ny mpanoratra hafa alaina tahaka. Mandria am-piadanana.
@diegomaia Nahoana moa raha manoratra tsy misy mari-piatoana ny olona rehetra androany ho fanomezam-boninahitra an'i Saramago
@joaomhenrique Andao isika rehetra hanaisotra ny faingo avy ao amin'ny bokotra solosaina mba ho fanomezam-boninahitra. Mandria am-piadanana José Saramago
@maria_fro Tena malahelo aho, mihoatra noho ny maha-mpanoratra azy tena tsara indrindra i Saramago, nankasitrahana izy tamin'ny fifandraisany sy ny fotokeviny
Nanome soso-kevitra momba ny lahatsoratr'i Saramago izay tsara ho vakiana ihany koa i Maria Frô tao amin'ny blaoginy, indrindra fa ny antsafa farany nifanaovany tamin'ny El País izay nahitana ilay mpanoratra nilaza hoe: Aza miresaka amiko momba ny fahafatesana, satria efa fantatro izany .
Mamela antsika hisaintsaina ny soatoavina ara-tsaina sy ideolojika amin'ny toetra izay hiaina amin'ny alalan'ny teny ny lahatsoratra farany nivoaka tao amin'ny bilaogin'i Saramago antsoina hoe “Think, Think” (Eritrereto, Eritrereto) .
Heveriko fa tsy ampy filôzôfia isika ao anatin'ny fiarahamonintsika amin'izao fotoana izao. Sehatra, toerana, ary fomba iray handinihana ny filôzôfia, izay mety tsy manana tanjona voafaritra manokana, toy ny siansa, izay mivoatra mba hanatratrarana ny tanjona. Tsy ampy fieritreretana, fisaintsainana isika, mila ny asa dia ny mieritreritra isika, ary ho ahy toa tsy afaka mankaiza isika raha tsy misy hevitra.